9 Yemahara Mitambo uye Zvikumbiro kuti Unakirwe Svondo | IPhone nhau
9 Yemahara Mitambo uye Zvikumbiro kuti Unakirwe Svondo
Kutora mukana weKisimusi iri kuuya, uye mazororo ayo vazhinji venyu achakwanisa kunakirwa, uye atove pakati pevhiki, zvinopihwa uye zvinoderedzwa muApp Store zviri kuwedzera. Mazhinji maapplication ayo anowanzo kubhadharwa anogashira akakosha kuderedzwa, uye ndiyo nguva yakanakisa yekurodha mitambo uye kunyorera mahara, nekuti isu tine vhiki rese rekuyedza.
Rangarira kuti mitambo yese uye zvinoshandiswa mune ino posvo ndizvo pa kupihwa mahara kwenguva pfupi; Isu hatizive kuti kukwidziridzwa kucharamba kuchienderera kwenguva yakareba sei, chatinoziva ndechekuti ivo vanoshanda panguva yekutsikisa runyorwa urwu, saka, kurumidza uye utore ivo mushambadzi asati ademba.
2 ZoomNotes- Notetake, Sketch, PDF, Parizvino
3 Multiple Stopwatches yekushandisa kwako
4 Tsika Screens
7 Jet Bhora (HD)
8 Hondo yekuora
9 Kuvhara Vakafa
Munguva dzazvino nguva, tinoshandisa chikamu chakakura chezuva neiyo iPhone iri muruoko, kubvunza Facebook, Twitter, Instagram, tichitaurirana paWhatsApp kana Teregiramu kana kutamba mutambo weSuper Mario Run. Dzimwe nguva izvi zvinogona kuwana zvishoma kubva muruoko, uye isu hatinyatso kuziva zvatakashandisa nguva pane, kana izvo zvatakapedzera yedu iPhone bhatiri pane. Apptracker inoongorora iyo nguva yatinoshandisa tichishandisa yega yega mafomu pane yedu iPhone, uye inotibatsira kuziva kuti, pamwe, isu tinofanirwa kuzvicheka zvishoma. Icho chirongwa chakakurudzirwa kwazvo, kunyanya kana iwe uchifunga kuti ungave uine kutsamira pane yako iPhone kana kuti uone izvo vana vako vanopedzera nguva yavo pazviri. Mutengo wadzo wenguva dzose uri € 4,99 asi izvozvi unogona kuzviwana mahara.
ZoomNotes- Notetake, Sketch, PDF, Parizvino
ZoomNotes Ndicho dhijitari notibhuku izvo zvinonyanya kubatsira pane yako iPad kutora manotsi neruoko nechero stylus. Inosanganisira sarudzo dzakasiyana siyana kusarudza pakati pezvinyoreso, makara, kusimbisa ... Iyo ine «kurambwa kwemichindwe», ndiko kuti, inoona chanza cheruoko kuti chisakanganisa kunyora, uye imwe yesimba rayo kushandisa zoom, kuita kuti kunyora kuve nyore. Mutengo wadzo wenguva dzose uri € 7,99 asi ikozvino ndezvemahara kwenguva yakati wandei.
Multiple Stopwatches yekushandisa kwako
Ichi chikumbiro chaunogona tarisa kuti wave nenguva yakareba sei uchiita kana kusaita chimwe chinhu, yakapusa seiya. Uine intuitive uye yakajeka mavara interface, unogona kumisikidza akawanda ma timers iwe aunogona kumbomira nekubata kamwe chete uye nekudaro iwe unozoziva kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti uite basa, kuti wave nenguva yakareba sei usina kusvuta, zvave nenguva yakadii kubvira chinwiwa chekupedzisira ... Mutengo wadzo wenguva dzose ndi0,99, € XNUMX, ​​asi izvozvi unazvo mahara muApp Store.
Kana iwe wakaneta neyakajairwa mapikicha pane yako iPhone, mune ino app iwe unowana mijenya uye yakawanda HD mapikicha kuti ubate zvakasiyana. Mutengo waro wenguva dzose ndeye € 1,99, ikozvino wakasununguka kwenguva shoma.
beyondPhoto Ndicho foto uye vhidhiyo mupepeti we iPhone iyo iwe yaunogona kushandisa mune yakazara skrini kugadzirisa kupenya, kusiyanisa, kuburitsa, tembiricha, nezvimwe, mukuwedzera pakukwanisa kuwedzera mafuremu, zvinyorwa, mafirita ... Mutengo wayo wenguva dzose iUS $ 0,99, asi ikozvino unouwana mahara kana uchikurumidza.
Zvakanakisa kadhi mutambo Kune iwo nguva mune yekugezera, bhazi / yepasi pevhu inokwira kana mutsetse uri kubhangi, zviri pachena kuti iRoga Mumwe. Uye ikozvino unayo yemahara kwenguva yakatarwa yekuchengetedza iyo € 1,99 iyo inowanzo mutengo.
Jet Bhora (HD)
«Jet Bhora isimba rine ruzha rwekushambadzira mutambo uzere nemifananidzo inoshamisa, matani emasimba akasimba» maunofanirwa kuparadza zvidhinha nezvipingamupinyi yakatarwa kuve inodarika iwo mazinga. Mutengo wayo wenguva dzose i $ 1,99 asi vhiki ino iwe unayo mahara.
Mutambo yepakutanga, retro, inonakidza uye muropa zvakanyanya izvo zvinowanzoita € 0,99 asi ikozvino unogona kuzviwana mahara.
Ichi ndicho Pikicha mutambo uye zombies. Chinangwa ndechekuparadza ese maZombi aunogona. Asi iwe unofanirwa kukurumidza uye pamusoro pezvose, usaite zvikanganiso. Mutengo waro wenguva dzose uri € 1,99 asi izvozvi unazvo mahara muApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 9 Yemahara Mitambo uye Zvikumbiro kuti Unakirwe Svondo
Maitiro ekuchengetedza bhatiri uchitamba Super Mario Run